कृष्ण कंडेलले इन्द्रेणी छोडछु भन्दै भाबुक भए ! मलाई धेरै पागल भन्यो भन्दै चित्त दुखाए भगेरी चरीलाई भव्य सम्मान ?(भिडियो सहित) «
Published : 25 January, 2021 12:23 pm
उज्यालो नेपाल समृद्धीका लागी साँकृतिक अभियानका साथ अघि बढेको लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रणीे पुराना सर्जकको सम्मान र नँया प्रतिभाको खोजिमा अघि बढेको छ । संस्कृती सभ्यताको जननी हो भन्ने मुल नाराको साथ अघि बढेको इन्दे्रणीले पनि लोक सँस्कृतीको माध्यमबाट देशको संस्कृती र सभ्यतालाइ बचाइराखेको कुरा बिश्वभरी अवगत नै छ ।
प्रशिद्ध कार्यक्रम इन्द्रेणीका सञ्चालक कृष्ण कंडेलले सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ । बिगत २० बर्ष देखी सञ्चालन हुँदै आएको सो कार्यक्रको माध्यम बाट दुखि गरीब तथा रोगले पिल्सीएका जनताले साहारा पाउँदै आएका छन् । इन्द्रेणीका सञ्चालक कृष्ण कंडेल दुरदराज बस्ती बस्तीमा लुकेर रहेका ति चपेटामा परेका आवाजलाई बुलन्ध पारेर न्याय दिने काम गर्नुभएको छ । समाजमा हुने संस्कार,संस्कृति बिरोधि आवाको बिरुद्धमा आवाज उठाउने त्यस्ता प्रकारका खराख तत्वहरुलाई जरैबाट उन्मुलन गर्नुमा उहाँको निकै ठुलो भुमिका भएको पाइन्छ ।
उहाँ आगलागी भएका बस्तीमा गएर राहत प्रदान गरेका जोलन्त उदाहरण छन् । बाढी पहिरोले उठिबास गरायका नाना,माना, छानाको खोजिमा छटपटायका दुखि गरीबको बस्तीमा पुगेर सहयोग गरेको यस्लाई पनि महान कार्यको रुपमा लिने गरीन्छ । जहाँ राज्य पनि अहिले सम्म पनि पुग्न सकेको छैन जहाँ कृष्ण कंडेल पुग्नुभएको छ । त्यस्तै हिजो एक अन्तर्वार्तामा म अब थाकीसके, बिरामी पनि छु अब चाडै नै नयाँ पुस्तालाई इन्द्रेणी सुम्पिन्छु भनेका छन। अब छत्र शाहीहरु जस्तालाई जिम्मा दिएर आफु खोज मुकल पत्रकारिता गर्ने सोच भएको बताए। हेर्नुहोस भिडियो :
औषधि भन्दै पाउरोटी बोक्नेलाई भाइरल प्रहरीले गरे सडकै अनौठो सजाय, सडकमै चर्काचर्की……(भिडियो सहित)
बुधबार दिउँसो नयाँ बसपार्कको चेक प्वाइन्टमा पुग्दा मोटरसाइकलामा रहेका युवा प्रहरीले तयार गरेको घेराभित्र थिए